जनयुद्धमा मन्दिर भत्काउन आदेश दिने प्रभाकरले गरे चर्चको शिलान्यास
८ चैत्र,काठमाडौ । के तपाईलाई थाहा छ ? कुनै वेला नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा (प्रभाकर)ले के भन्थे ? आज उनले के गरिरहेका छन ? उनले जनयुद्धको समयमा यस्तो भन्ने गर्थे “पुजा पाठ गर्नु हुदैन, यो रुढीवादी हो, […]
जनपत्रकार संगठनले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा एकै साथ वुझायो ज्ञापन पत्र
माघ १८, कालिकोट । जनपत्रकार संगठन नेपालले कर्णाली प्रदेशका १० र लुम्विनी प्रदेशका दुई जिल्ला सहित १२ जिल्लामा एकै दिन नेपाल पत्रकार महासंघको प्रदेश र जिल्ला शाखा कार्यालयहरुमा ज्ञापन वुझाएको छ । मंगलवार जनपत्रकार संगठन नेपालले श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्युनतम पारिश्रमिक […]
गिरफ्तार गरिएका कार्यकर्ता रिहा गर्न नेकपा रुकुमको माग
१३ साउन,रुकुम पश्चिम । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी रुकुम पश्चिमले मंगलबार सानीभेरी गाउँपालिका ८ का वडाअध्यक्षलाई जनकार्बाही गर्दा आफ्ना कार्यकर्तालाई झुट्टा मुद्दा लगाई गिरफ्तार गरेको भन्दै निसर्त रिहा गर्न माग गरेको छ । नेकपाले एक विज्ञप्ती गरी केही संन्चार माध्यमाले भ्रम […]
भेरी नदिमा डुबेर बहिनीको मृत्यु, दिदी बेपत्ता
२५ जेठ, जाजरकोट । भेरी नदीमा डुबेर पश्चिम रुकुमकी एक बालिकाको मङ्गलवार दिउँसो मृत्यु भएको छ । उनकी दिदी नदीमा बेपत्ता भएकी छन् । त्यस्तै एकजना घाइते भएका छन् । पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका –१२ दुरनेटाका अम्मर डाँगीकी ११ वर्षकी […]
रुकुम पश्चिमको झड्पका तीनजना घाइते नेपालगञ्ज ल्याइयो
७ माघ, सुर्खेत । रुकुम पश्चिमको आठबीसकोटस्थित राडी बजारमा मंगलबार भएको झडपमा परी घाइते भएका वडाअध्यक्षसहित तीनजनालाई थप उपचारका लागि नेपालगञ्ज पुर्याइएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा प्रचण्ड–माधव समूह निकट युवाबीचको विवादले उग्ररुप लिँदा कांग्रेस निकट आठबीसकोट नगरपालिका –९, […]
रुकुम पश्चिमको राडी बजार तनावग्रस्त, प्रशासनद्वारा निषेधाज्ञा जारी
६ माघ, सुर्खेत । रुकुम पश्चिमको आठबीसकोटस्थित राडी बजारक्षेत्र मंगलबार दिनभर तनावग्रस्त बन्यो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा प्रचण्ड–माधव समूह निकट युवाबीचको विवादले उग्ररुप लिँदा राडी बजार क्षेत्र दिनभर तनावग्रस्त बन्न पुगेको थियो । सामान्य विषयमा सुरु भएको विवादले उग्ररुप […]
२ माघ सुर्खेत । रुकुम पूर्वका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गजेन्द्रबहादुर ओलीसहित पाँचजनालाई जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख ओलीसहित रुकुम पूर्व […]
नेकपा नेता प्रभाकर दम्पतीलाई कोरोना संक्रमण
९ कात्तिक, काठमाडौं । नेकपा नेता जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ र उहाँकी पत्नी लक्ष्मीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । शनिबार गरिएको परीक्षणमा शर्मा दम्पतीमा कोरोना संक्रमण देखिएको हो । उहाँमा हल्का ज्वरो आएपछि शंका लागेर स्वाब परीक्षण गरिएको थियो । […]
रुकुम पश्चिमा ८ महिनापछि खेलकुद प्रतियोगिता
कार्तिक ५ सुर्खेत । रुकुम पश्चिम जिल्लामा ८ महिनापछि खेलकुद प्रतियोगिता सुरु भएको छ । दसैंको अवसर पारी सानीभेरी गाउँपालिकामा खुला पुरुष डबल ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता सुरु भएको हो । सानीभेरी समाज विकास केन्द्रले सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड अपनाएर प्रतियोगिता आयोजना गरेको […]
हाम फालेको हैन, जनार्दन जी कुटेर फालिएको हो भेरीमा दलितलाईःतुफान
आज संसदमा बोल्दै जनार्दन शर्माले जुन बोल्नु भएको छ रिपोर्ट यो आपत्तिजनक छ । जाजरकोटका दलित युवाहरुलाई ज्यान जोगाउन हाम्फालेर घटना घट्न पुग्यो भन्ने जुन बोल्नु भयो त्यो गलत छ। ज्यान जोगाउन हाम्फाल्ने हरु बाचेका छ्न उहाँ अहिले आफन्त कहाँ […]
विजयी भाेजले मेरो साहारा गुम्याे म कसरी बाचु: प्रेम दर्जिकाे आमा
करिब ५ घन्टा पछि चिहानघाटमै पाेष्टमार्टम र दाहसंस्कार
खाल्डो माथि शव, दाहसंस्कार राेकियाे
विजयी भाेजमा गएका एक पुरूष मृत भेटिए
इमेल : jwalakhabar@gmail.com